WhatsApp ga-enyere anyị aka ibudata otu data anyị | Akụkọ akụrụngwa
Enweghị ike ịgọnahụ na ihe omume nke May 25 na-eme ka ụlọ ọrụ teknụzụ na-arụ ọrụ megide elekere ma na-eme mgbanwe ka ọ pụta ìhè karịa mgbe ọ na-etinye nchịkọta data. Iwu nchekwa data ohuru nwere ike ime ka ụlọ ọrụ na-adịghị edozi iwu ọhụrụ ahụ dị mma. Na WhatsApp akwadebelarị maka ya na mgbanwe ọ kwupụtara. Mana nke kachasị mkpa: ị ga - enwe ike ịrịọ maka otu data gị n'oge na - adịghị anya.
na onwe blog WhatsApp, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwuwapụta na ọ na-eme mgbanwe ma na-ekwusi ike na data niile ezoro ezo na njedebe na ọbụnadị na ha enweghị ike ịgụ ma ọ bụ gee ntị na mkparịta ụka ị nwere. N'otu aka ahụ, ha dokwara anya na ha anaghị ekenye data gị iji melite ahụmịhe onye ọrụ ma ọ bụ ịnata mgbasa ozi sitere na Facebook. Ha bu n'obi ịmekọrịta na ụlọ ọrụ Facebook ndị ọzọ, mana akụkọ ga-abịa n'oge na-adịghị anya na oke nkọwa. O sina dị, ihe kachasị masị anyị bụ na enwere ike ịrịọ nbudata nke data gị niile.
Companylọ ọrụ ahụ na-achọpụta na n'ime izu ndị na-abịanụ, anyị ga-enwe ngwá ọrụ ọhụrụ na nhazi WhatsApp nakwa na ọ ga-adịịrị ndị ọrụ niile n'ụwa niile. N'ezie, ha niile ga-enwe ụdị ọhụụ nke ozi izi ozi dị ugbu a. N'otu aka ahụ, a ga-eru ma gam akporo na iOS ọrụ.
Kedụ ka ị ga - esi budata data gị niile? Ga-aga na “Mwube” ma gaa na “Akaụntụ” ngalaba. Mgbe ahụ anyị ga - enwe nhọrọ ọhụrụ - akabeghị ya mgbe anyị na - ede edemede a - nke ị ga - arịọ «Rịọ ozi akaụntụ». Na nke a ị ga-eziga arịrịọ na WhatsApp yana nke ị ga-enweta nzaghachi n'ime ụbọchị atọ.
Mgbe oge a gasịrị, ị ga-enweta ọkwa site na ụlọ ọrụ na-agwa gị na ị nweela faịlụ gị ibudata. N'okwu a, ị ga-aga otu ebe ahụ Ntọala> Akaụntụ> Rịọ ozi akaụntụ ma ebe ahụ ị ga-enwe nhọrọ iji budata akụkọ zuru ezu. Gị ga-ebudata faịlụ ZIP nke ga-enwe faịlụ nwere ndọtị HTML na JSON ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » WhatsApp ga-enyere anyị aka ibudata otu data anyị